निण्टेण्डोले केस जितेपछि, के भयो मारीकार ? | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > AKIHABARA > निण्टेण्डोले केस जितेपछि, के भयो मारीकार ?
मारीकार एउटा जापनी एडभेन्चर कम्पनि हो। यो कम्पनिले मानिसहरुलाई टोकियोमा अनेकौ निण्टेण्डो क्यारेक्टरको लुगा लगाएर भिडियो गेमको मारियो कार्ट जस्तै सानो किसिमको कार्ट चलाउन मिल्ने एक प्रकारको स्पोर्ट संचालन गर्दछ। निण्टेण्डोले यो कम्पनीलाई आफ्नो क्यारेक्टर र कन्सेप्ट प्रयोग गरेको भनेर कपि राइटको केस हालेको थियो र आखिरमा केस पनि जित्यो।
यो घटना पश्चात धेरै मानिसहरु मारी कारको भबिस्य’bout चिन्तित थिए। मारीकार्ट बन्दहुने भनेर थुप्रैले तर्क समेत गरेका थिए। तर मारीकारले आफुलाई निण्टेण्डोबाट छुटकारा लगाएर पनि उपस्थित हुने नया उपाए जुटाएको छ। यो सबैको लागि खुसीको कुरा हो।
मारीकार नामको कम्पनि अब जापानमा छैन। उनीहरुले यो कम्पनिको नया नाम राखेका छन्। यसलाई अब स्ट्रीट कार्ट भनिने छ। स्ट्रीट कार्टले आफ़ो वेबसाइटमा आफु निण्टेण्डो र मारियो कार्ट संग कुनै संलग्नता नरहेको जनाएको छ। अहिले राखिएको नया नामलाइ भने मानिसहरुले सामान्य नाम भनेका छन्। अब स्ट्रिट कार्ट सफर गर्ने मानिसले कपडा भाडामा लिने भएता पनि, ति कस्ट्युमले निण्टेण्डोको क्यारेक्टर नजनाउने बताइएको छ।
निण्टेण्डो संगको संलग्नता नरहेपनि यो एडभेन्चर राइडको पपुलारिटि भने घटेको छैन। अहिले पनि दिनहु थुप्रै जापानी र पर्यटकहरु यो राइडमा सहभागी हुन्छन।
के हो त स्ट्रीट कार्ट ?
मैले माथिनै भनेको अनुसार स्ट्रीट कार एक एडभेन्चर स्पोर्ट सर्भिस हो। यस टुर मार्फत हजुरले टोकियोको निश्चित तोकिएको सार्बजनिक सडकमा सानो कार्ट खालको गाडी चलाउन सक्नु हुनेछ। यसमा यात्रा गर्दा हजुरले टोकियोको बेग्लै खालको परिप्रेक्ष्य पाउनु हुनेछ। यदि हजुर पनि तोकियोमा हुनु हुन्छ र यो राइड लिन चहानु हुन्छ भने तल दीएका केहि कुरामा ध्यान पुर्यानुहोस्।
यो कार्ट चलाउन सर्ब प्रथम हजुर संग लाइसेन्स हुनु पर्दछ। हजुर संग जापानी वा अन्तरास्ट्रिय लाईसेन्स हुनु पर्दछ। स्विजरल्याण्ड, जर्मनी, फ्रान्स, ताईवान, बेल्जियम, इस्टोनिया, मोनाकोका नागरिकले आफ्नो देश को ड्राईभिङ्ग लाईसेन्स जापानी भाषामा उल्था गरेर ल्याउदा हुन्छ। अमेरिका स्टेट फोर्समा काम गर्नेहरुले SOFA को ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स ल्याउदा हुन्छ।
यदि हजुर संग जापानी वा SOFA को लाईसेन्स छैन बहने आफ्नो पासपोर्ट लिएर आउन नभुल्नु होला। त्यसैगरी अन्तरास्ट्रिय लाईसेन्स जापानमा रहेका छोटो अबधिकालागि बसोबास गर्ने बिदेशी नागरिकको मात्र मान्य हुनेछ। यदि हजुर जापानमै बसोबास गर्नु हुन्छ भने यो मान्य हुनेछैन।
सुरक्षाको लागि हेल्मेट र सिट बेल्ट:
यो कार्ट प्रकारको गाडि जापानको रोड ट्रान्सपोर्ट एक्टमा रहेको भेइकल सेफ्टी स्त्याण्डर्ड भन्दा सानो भएको ले यसलाई चार पाङ्ग्रे साईकल भनिन्छ। त्यसैले यो चलाउदा हेलमेट र सिट बेल्ट लगाउनु पर्दैन थियो। तर थुप्रै मानिसहरुले यो राइड गर्ने भएकोले यो संग सम्बन्धित दुर्घटनाहरु बढ्न थालेको छ। त्यसकारण जापानको भुमि, भौतिक, यातायात र पर्यटन मन्त्रालयले नया नियम लागु गर्ने भएको छ। यो नियम अनुसार २०२० देखि स्ट्रीट कार्ट राईडमा पनि सिट बेल्ट र हेल्मेट लगाउनु पर्ने छ।